Yenza i-thesis yenkosi yakho ibhalwe ngabakwa-papernerds abaqeqeshiwe
Bhala ithisisi yenkosi yakho
Yiba nama-theses master master abhalwe kahle. Nathi uthola usizo olusheshayo kumbhali onolwazi, onesipoki.
Yenza ithisisi yenkosi ibhalwe yisazi - Kungani empeleni?
Ithisisi yenkosi imele ukusebenza kokuhlolwa kokugcina komfundi we-master. Akufani ngokobubanzi kuphela ithisisi eyinhloko Kangangokunokwenzeka kusuka kuthesisi ye-bachelor, ngoba okuyisisekelo ekubhalweni komqondo ophumelelayo enkosini ukwethulwa kokucatshangelwa okuhambisanayo nokuqonde izinhloso zakho. Ngaphezu kwencazelo ye-bachelor echaza ngokuphelele, leli banga lidinga umsebenzi ozimele ekubhekaneni nemibuzo engaphendulwanga. Ngale njongo, umfundi uvame ukunikezwa amakhasi angama-60-80 ukuze afakazele ulwazi lwe-methodical nolwazi oluqondene nezifundo ngaleli zinga. Okuzwakala njengomsebenzi omningi futhi kungani abafundi abaningi bezizwa bekhungathekile yilomsebenzi omkhulu futhi othintekayo. Kodwa-ke, kungenzeka ngokuphelele ukufuna usizo lochwepheshe.
Ukubhala ithisisi yenkosi ngosizo lochwepheshe
Kepha kuthathwa kanjani ukuthi kuthunywe umuntu Ababhali bomoya ngomqondo osemthethweni? Ngabe kufanele ngilindele imiphumela efana nobungozi bokukopela lapha? Noma kukhona izindlela zomthetho zokuxhumana ne- Ukubhala ithisisi yenkosi ukuvumela usizo?
Ngomqondo obanzi, empeleni kunqatshelwe ukudlulisa imicabango engaphandle engamakiwe njengeyakho. Kepha hhayi ukuthola usizo ekutholeni izincwadi nasekubuyekezeni izinqubo zokucabanga. Lokhu kusho ukuthi imibono evela kwabanye nayo ingatholwa ngaphandle kokungabaza futhi isetshenziselwe ukudala owakho umsebenzi.
Ngosizo lwabasebenzi bethu abangochwepheshe, ngakho-ke akuyona inkinga ukuthola usizo olusheshayo nolunembile ngokuthengwa, ukubhalwa nokulungiswa komqondo wenkosi.
"Ekugcineni ngineziqu zemasters yami! Futhi ngamamaki aphezulu."
Master in Ukuphathwa Kwebhizinisi
Yini okufanele icatshangwe ngokujwayelekile lapho kubhalwa ithisisi yenkosi?
Uziphatha ngokusemthethweni ithisisi eyinhloko njenge mqondo we-bachelor: Lokhu kuhlukaniswe kwaba yiphepha lokumboza, uhlu lokuqukethwe, isigaba sombhalo, uhlu lwezinkomba nesithasiselo. Kodwa-ke, ithisisi yenkosi ikhombisa umehluko omkhulu engxenyeni yezobuciko, njengoba kunebubanzi obengeziwe bomsebenzi ozimele.
Ngokuya ngobubanzi, i-bachelor ne-master thesis iyahluka kumakhasi angama-40-50 kuhlelo lwe-bachelor kuya kumakhasi angama-60-80 kuma-master's. Kodwa-ke, umsebenzi obanzi kakhulu kungenzeka, ngoba imininingwane yesihlalo lapho umsebenzi ubhalwe khona iyanquma lapha.
Ngokunjalo, isikhathi sokucubungula i-thesis ye-master sinwetshwa safinyelela ezinyangeni eziyisi-6, nakho okubangelwe izimfuno eziphakeme zethisisi. Ukuze ungalahlekelwa yinjongo lapho ubhala umsebenzi onjalo, umuntu akufanele anganaki ukuhlela okuhle. Njengawo wonke amaphepha ezifundo, lokhu ikakhulukazi kumele isakhiwo kanye nocwaningo olunzulu lwezincwadi.
Ukukhetha isihloko esifanele kubalulekile empumelelweni yethesisi yenkosi
Kusukela Umklamo wethisisi yenkosi kuncike kakhulu ekunikeleni kwakho, isihloko kufanele sikhethwe ngqo. Ukuze wandise ugqozi, izihloko lapho kunentshisekelo esekwe kahle engxenyeni yakho zisiza lapha. Imibhalo yamanje esihlokweni nokuthi yiziphi izindlela zokuqoqa ulwazi ezingasetshenziselwa ucwaningo olwengeziwe nayo akufanele inganakwa. Uma zonke lezi zihloko seziphathwe ngendlela egculisayo, ukubhala kwangempela kwephepha kungaqala.
Funa usizo ngesikhathi esifanele
Das Ukubhala ithisisi yenkosi kungadingeka kakhulu, ikakhulukazi lapho ukucindezela kwesikhathi kuyisici. Kubaluleke kakhulu lapha ukuhlola kahle ulwazi nokubukwa okutholakele. Ngempela, lokhu kungaba yinselelo enkulu, okulula kakhulu ukuyazi ngosizo olunekhono.
Uma unemibuzo mayelana nezindlela, izingcaphuno, izinkomba kanye nezinombolo ezifanele, sicela uxhumane nochwepheshe bethu abavela eminyangweni efanele. Isitoko sethu sesipiliyoni sidlulela kuzo zonke izifundo nezifundo. Sijabule futhi ukusiza ngokuqoqwa kwezingxoxo kufaka phakathi ukuhlolwa futhi singajabula ukukwenzela iphakethe eliphelele.
Thembela ekuhlakanipheni, olwazini nasekhonweni lethu Umlobi we-Ghostwriter futhi uzivumele ube ngowakho ithisisi eyinhloko bhala kusuka kochwepheshe.
Umnqamulajuqu wakho ususondele ekhoneni, kusamele ufunde izivivinyo zaseyunivesithi ezizayo futhi ungazi ukuthi wenzeni ngenxa yezinkinga zesikhathi? Ayikho inkinga! Nathi uthola usizo lochwepheshe kumbhali wesipoki onamava futhi onekhono, ngaphandle kwesihloko! Ababhali bethu abayizipoki banokubuka konke okubhaliwe futhi okusesikhathini kwezincwadi ezisezifundweni zabo, bajwayelene kakhulu namagama afanele futhi bayazi ukuthi bangazisebenzisa kanjani izindlela eziqondene ngqo nezihloko ukuthuthukisa ithisisi eyinhloko erfolgreicher qedela. Nethimba lethu eceleni kwakho, ungafundela izivivinyo ezizayo futhi akusadingeki ukhathazeke ngethisisi yenkosi yakho yesayensi!
Imibuzo mayelana ne-thesis yenkosi nokuthi yini ebalulekile uma unayo ebhaliwe
Kubiza malini ukuba nomqondo wenkosi ubhalwe?
Njengomthetho, ababhali bethu basebenzela ithisisi yenkosi yakho zingakapheli izinsuku eziyi-14-31. Ngokuya ngesichasiselo nesihloko, lokhu kungokwemvelo. Lokhu futhi kuyinani akuchazwanga ngokuqondile. Ngoba ngesikhathi lapho umbhali ebhala khona ithisisi yakho ye-bachelor, angasebenza nasemkhakheni ozimele. Cabanga ngezindleko ze- Umbhali onguchwepheshe okuvame ukuzuzwa, njengoba kuzokuhambisa nasesikhathini esilinganayo.
Noma kunjalo, ungathola ifayela le- isicelo esingabophi setha noma a Hlela ukubonisanaukucacisa yonke imibuzo kusengaphambili.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukubhala ithisisi yenkosi?
Ababhali bethu bangakwazi zingakapheli izinsuku eziyi-14-31 bhala ithisisi yenkosi. Kuya ku- Ukubhalela ithisisi yenkosi ephelele kuzothatha umbhali onguchwepheshe emkhakheni wakho mayelana nokuthi nje.
AbakwaPapernerds bathumela ababhali ngeziqu zobudokotela kanye nokujwayela abangakubhalela umsebenzi omuhle kakhulu. Ukuze ukwazi ukukuqinisekisa ngekhwalithi ephezulu futhi ngaphezu kwakho konke ithisisi yenkosi ephelele, buza ngesikhathi esihle.
Vele, umbhali onolwazi angabhala ithisisi yenkosi yakho ngesikhathi esifushane kakhulu, kepha lokhu kuzothinta nakanjani ikhwalithi nokuphelela komsebenzi wakho.
Ubani ozongisiza ngethisisi yenkosi yami?
Ngaphezu kwabafundisi abanolwazi, odokotela nabaphenyi ongaxoxa nabo, unethuba lokusebenza nomqeqeshi noma umbhali onconywe yithi.
Sinababhali abahle kakhulu abaneziqu zobudokotela kanye nokuhlala kanye nosolwazi abaphuma kwezinye izindawo abangakusiza ngethisisi yenkosi yakho.
Ngingayikhokha yini ithisisi yenkosi yami ngezitolimende?
EPapernerds, kunjalo, unenketho yokukhokhela ithisisi yenkosi yakho ngezigaba. Siyajabula Ukulethwa kwengxenye nokukhokha okuyingxenye hlela.
Khumbula, noma kunjalo, ukuthi umbhali angenza umsebenzi wakho ngokugcwele uma usukhokhelwe ngokuphelele. Ngaphandle kwalokho kuzofanele amukele eminye imisebenzi phakathi ukuze aqinisekise umholo wakhe.
Yonke eminye imibuzo nezimpendulo mayelana nokubhala ghost kanye nama-papernerds kungatholakala ku Isigaba se-FAQ.
Abahleli bethu bangongoti bezemfundo emikhakheni yabo futhi bakha umsebenzi wakho wesayensi ngokuya ngezifiso zakho.
Thumela isicelo samahhala manje futhi uzothola umsebenzi wakho wesayensi ngosuku lokuzikhethela kwakho! Siqalisa umsebenzi wakho ngesikhathi.
Yenza isicelo samahhala
Umsebenzi ngamunye uhlukile
Sikunikeza inkululeko eqinisekisiwe ekukopeleni nasemaphutheni ngokuhlolwa kwekhwalithi ebanzi futhi ngaleyo ndlela ufakazele ukuthi umsebenzi wakho uyikhophi eyodwa yekhwalithi ephezulu. Akukho ukukopela, akukho miphumela - ukubhala ghost okuchwepheshe.
Cela into eyingqayizivele
AbakwaPapernerds abagcini ngokunikeza ngomnyango wekhwalithi onokwethenjelwa wephepha lakho lesikhathi, ithisisi ye-bachelor noma i-master thesis, kepha futhi nomhleli onolwazi onensizakalo enhle kakhulu yokuthayipha.
Akukho ukukopela - izinto ezihlukile kuphela.
Siyajabula ukukusiza uphendule yonke imibuzo yakho nangaphambi kokuba ufake i-oda.
Abahleli bethu bayizifundiswa ezaziwayo futhi bangabafundisi abaqinisekisiwe abanolwazi lweminyaka eminingi emsebenzini wesayensi.
Oxhumana naye ngqo
Uhlala uthintana nethimba lethu losekelo elizinikele kakhulu. Ukuhlinzekwa kwamakhasimende kubaluleke kakhulu kumaPapernerds.
Ungathembela emsebenzini wesayensi wamaPapernerds. Sineziqondiso eziqinile zekhwalithi zabalobi bethu. Akukho ukukopela, akukho miphumela.
Ngazo zonke izilimi
Ngabe udinga usizo ngomsebenzi wolunye ulimi? Ayikho inkinga! Ithimba lethu elinolwazi lizojabula ukukweluleka ngezindawo nezilimi zethu ezikhethekile.
Ukuqonda kubaluleke kakhulu kumaPapernerds. Ngaphezu kokuxhumana okubethelwe nokungaziwa, sinamathela ngokuqinile ekuvikelweni kwedatha.
Yonke imisebenzi yesayensi ihlolwe yisifundo sesibili ngokusebenzisana nombhali. Isoftware ye-Plagiarism ihlola ubungqayizivele.
Ngenxa yosizo olusheshayo nolunekhono oluvela kuma-papernerds, ngikwazile ukulungiselela kahle. Ngiyabonga!
UJule H.Iposi lokufundisa
Ukwesekwa okuvela kubafundisi bami bePapernerds.de kunikeze umsebenzi wami wasekhaya ukuqeda. Oxhumana naye wayehlala enobungane futhi enekhono.
Ngosizo lwama-papernerds kwakulula kakhulu ukuthola iphepha lesikhashana leyunivesithi yami.
UMila S.IsiJalimane njengolimi lwangaphandle
Ngiyabonga ngosizo olukhulu. Kumnandi ngempela ukusebenza nabantu abazi ukuthi benzani. Kunganconywa nje!
UFeliksi M. imithi
Ngaphandle kwakho bengingeke ngiwenze umnqamulajuqu wami! Ngiyabonga. 🙂
Uthole usizo ngoba bengingeke ngikwenze ngesikhathi. Umxhumanisi wami ubengiphendula kakhulu futhi ebengisiza kakhulu esigabeni sokulungiswa. Ngiyabonga, qhubeka njalo.
UMaxim A.Umsebenzi wezenhlalakahle
THOLA UMNIKELO ONGABOPHISI MANJE
Sicela uthumele imibuzo noma ama-oda amasha avela kumakhasimende ethu akhona ngqo kumphathi wakho.
Ngiyifundile imigomo nemibandela (https://papernerds.de/AGBs/) kanye nesimemezelo sokuvikelwa kwedatha (https://papernerds.de/datenschutzerklarung/) futhi ngiyayamukela.
Imininingwane yakho izoba nathi okuyimfihlo ngokuphelele kwelashwa! Wonke umsebenzi wenziwa ngokungaziwa. Ngokuchofoza ku- "Isicelo ngaphandle kwesibopho", nginikeza imvume yami ekucutshungulweni kwedatha yami siqu ngokuya nge- I-Datenschutzerklärung.